Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 25/03/2020)
Ọ dị mfe iji na-eche na ike gwụrụ dị umengwụ n'oge a ogologo ụgbọ okporo ígwè na njem. Mgbe ọdụ na a ụgbọ okporo ígwè ruo ọtụtụ awa, ọ dị mkpa iji gbatịa gị ụkwụ mgbe o kwere omume. A obere ije na kantiin ga-enyere gị aka iji oge na iche na recharged. Na-eje ije site na e ji ebu ihe na kantiin, anya na odida obodo na-enwe ụfọdụ eji megharịa ọnụ na a onunu gị oke
Ejegharị ụgbọ okporo ígwè pụrụ ịbụ a na-elekọta mmadụ na ahụmahụ. Ihe ọhụrụ ndị mmadụ na ụgbọ oloko bụ mfe karịa ndị ọzọ ụdịdị nke iga. N'adịghị ka a ụgbọelu, i nwere nnwere onwe na-akpali gburugburu na-arụ na ndị njem ndị ọzọ. Ọ bụ-adọrọ mmasị ihe ị pụrụ ịmụta site n'aka ndị ọzọ na ha akụkọ – ekwu okwu banyere ndụ, na-arụ ọrụ na-eto eto maka netwọk gị. Ask the person next to you about the book their reading, na-enye ha a ụtọ ma ọ bụ nanị malite mkparịta ụka banyere ebe na ha na-ejegharị ejegharị na-. Ọ na-agafe mkparịta ụka gị mgbe ejegharị ejegharị Europe ụgbọ okporo ígwè na-emepụta na-adịgide adịgide na-echeta.
The ogologo ụgbọ okporo ígwè njem bụ mgbe ụfọdụ naanị oge udo mgbe gị njem. O nwere ike ịbụ a mma ohere maka gị gbanye mmanu na kwadebe maka gị họọrọ ebe. ọṅụṅụ ọtụtụ mmiri, eri nri ma ọ bụrụ na o kwere omume, ụra. Iji gị ogologo ụgbọ okporo ígwè na njem na-eji amamihe ga-enyere gị na-eche nweta ume ma nyere - njikere maka gị ọzọ ebe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/things-long-train-journeys/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)